Dhalinyaro Somali ah Kibandha doon ahayd oo Wajeer lagu xiray. Views:117 | Sunday, July 22nd, 2012 | By somaliradio
10 dhalinyaro looga shakiyay inay yihiin reer Muqdisho ayaa lagu xiray magaalada Wajeer ee Gobolka waqooyi Bari ee Kenya, kuwaasoo ku wajahnaa magaalada Nairobi ee xarunta dalka kenya.
Wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in dhamaan dhalintaasi ay ahaayeen kuwo katagay markii hore magaalada Nairobi iyagoo doonayay inay halkaasi kasoo helaan sharciga dalkana Kenya ee Kibaandhaha.
Baaritaano ay xalay sameeyeen ciidamada sirdoonka iyo pooliska magaalada Wajeer ayaa dhalintaani lagu soo qabtay iyagoo ku kala sugnaa xaafado kala duwan oo kamid ah Magaalada.
mid kamid ah ciidamada amaanka Wajer ayaa tibaaxay in dhamaan dhalintani lasoo taagi doono maxkamad islamarkaasina lagu qaadi doono dembiyo uu sheegay inay galeen oo ay kamid tahay sharci daro ay sheegeen inay magaalada Kujoogeen.
Qof goobjooge ah ayaa dhankale tilmaamay inay dhalinta yihiin kuwo ka imaaday Somaliya balse dad ay been u sheegeen, iyagoo laga dhaadhiciyay in Kibaandhe lasiinayo, isla markaana laga qaatay lacag badan.
qaar kamid ah dhalintaai ayaa hadda waxaa su'aalo weydiinayo ciidamada ladagaalanka argagixisada, lamana ogo waxyaabaha tooska ah ee laweydiinayo.
magaalada Wajer ayaa waxaa mararbadan ka dhacay qaraxyo lagu eedeeyay inay ka dambeeyaan ururka Al-shabaab oo Kenya ay dagaal kula jirto, iyadoo taasi ay dhalisay in magaalada bandow habeenkii ah lagu soo rogo, waxaana la geeyay ciidamo poolis ah iyo kuwa sirdoonka si ay u sugaan amaanka Magaalada.	Kay oo Boosaaso kula kulmay qeybaha bulshada Ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobey u qaab 23rd Nov 2013